“Waxa Daad-Xoorta La Raacinayaa Heshiiskii Ka Dhashay Go’aankii Maxkammadda Dastuuriga Ah Ee Madaxweynuhuna….” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Waxa Daad-Xoorta La Raacinayaa Heshiiskii Ka Dhashay Go’aankii Maxkammadda Dastuuriga Ah Ee Madaxweynuhuna….”
September 9, 2016 - Written by Mustafe Faro
“Haddii La Is-Weydiiyo In Shirkayagii Go’aan Lagaga Gaadhay In Labada Doorasho Ay [Wada] Qabsoomaan Jawaabtu Waa ‘HAA’ & ‘MAYA’- Dr. Maxamed Cismaan Fadal”
Hargaysa (Hubaal):-Waxaa 25-kii Ogost ka dhacay Wasaaradda Qoshaynta qolkeeda shirarka kulan ballaadhan oo ay isgu yimaadeen: Xukuumadda Somaliland oo ay masilayeen, Wasiirka Madaxtooyada – Mud Maxamuud Hashi Cabdi; Wasiirka Maaliyadda, Marwo Samsam Cabdi Adan; iyo Wasiirka Qorshaynta, Mud Shoombe Ismail Jirde. Waxa kale oo ka qayb-qaadanayey: xubno Komsishanka Doorashooyinka Qaranka (KDQ), Xisbiyada Qaranka oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha Baarlamaanka, iyo Xisbiga WADDANI Mud. Cabdiraxmaan Cirro iyo Guddoomiyaha UCID Eng. Feysal Cali Waraabe. Waxa Iyana ka qaybgalay, wakiillo ka socday hay’addaha Deeqbixiyeyaasha (SDC) oo ay miiska fadhiyeen wafti UK ka socda oo 3 qof ka kooban, Wakiilka Dawladda Danishka u jooga Somaliland iyo USAID iyo EU-da oo iyaga oo Nairobi jooga shaashadda la iska arko kala socday; waxa Iyana joogay qaybo bulshada rayidka oo ka mid yihiin kuwa Caalami ah sida Interpeace, Creative Associates iyo Safer World iyo Kuwa Gudaha oo ka joogtay dalladda SONSAF. Qodobada Muhiimka Ah Ee Waayaha Ku Gaadaaman Doorshada 28 March Ee Lagu Eegayo Kulanka?
Warabixinta Komashanka Doorashooyinka Qaranka laga sugayey ee ku saabasan geedisocodka Diiwaangelinta iyo u diyaargarwgeed Doorashooyinka Maarso, 2017:
Maaraynta cabadaha siyaadda ah ee ku gadaaman qabashada doorashooyinka u mudaysan 28ka Maarso, 2017: a) dhamaynta xeerka Doorashada Baarlamaanka; b) Meel ku tiirinta hadalhaynta in la kala qaado labada doorasho iyo muddo-kordhinta ka dhalan karta haddii la kala qaado.
Warbixintaa KDQ Waxay Tustay Ka Qaygalayaashii Shirka:
In kharashka wakhtigan lagu qaban karo doorashada wada socota uu yahay mid labada dhinac si hawlyar midba intiisa u bixin karo – waa isku dar toban malyuun dolar oo lagu fulinayo labada tallaabo ee Diiwaangleinta u dhiman iyo laba doorshao oo mar la wada qabto iyo hawlmaalmeedkii diyraarinta iyo maamulka hawshaas.
Sidaa darteed, xisbiyadii qaranku ee goobta joogay waxay ka dalbadeen in Xukuumaddu waxaa farguudkood ah ee ku soo hagaagay ee wax ka yar 4 malyuun, ay toos u qaadato, oo halkaa ka cadeeyaan maadaama oo wasiirradii ay taladu ka go’asya miiska fadhiyaan – waxaanay halkii cadeeyeen, Wasiirka Madaxtooyada iyo Wasiirka Maaliyadduba in ay qaadatay Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland qaybtii kaga soo hagaagtay miisaaniyadda dhamaystirka diiwaangelinta iyo qabashada isku marka ah labada doorasho ee Madaxtooyada iyo Golaha Wakiilada. Isla halkaa Xisbiyada Qaranka waxay ku booriyeen Deeqbixiyeyaasha in ay qaataan intooda, iyagoo kula noqdoono go’aan qaadashada xafiisyadoodii, waxaana laga dalbaday in ay todobaad gudihii ku soo jawaabaan.
Haddii la isweydiiyo su’aalaha: 1. In shirka go’aan lagaga gaadhay in Labada Doorasho ee muddaysan ay qabsoomaan 28 March, 2017? Jawaabtu waa “haa” iyo “maya”.
a) Mar haddii dhinacyadii shirka isugu yimi oo dhami ay wad yidhaahdeen “haa”; b) Mar haddii ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay caddaysay in ay farsamo ahaan u qaban karayaan una diyaaryihiin in labadii doorasho wakhtigii loo muddeeyey ku dhacaan; b) Mar haddii miisaaniyaddii ku bxi lahayd labada doorasho oo la wada qabto la soo bandhigay, oo la wada aqabalay oo weliba labadii dhinac ee bixin lahaa uu midba qaatay qaybtiisa, waxaynu odhan karanaa jawaabtu “haa”.
Haddana, “maya” xaggay ka imanaysaa? Waxay imanaysaa haddii Xukuumaddu iyo xisbigeeda KULMIYE aanay ka daacad ahayn go’aanka shirka. Waa haddi ay dhacdo : 1) In Madaxtooyadu go’aan ka gaadhiweydo qodobka Saami-qaybsiga iyo xeerka Golaha Wakiilada; 2) Haddii ay marto jidka kala qaaddista labada doorasho ee Madaxtooyada iyo Golaha Wakiilada.
Dhinicii Ururka SDC ee Deeqbixiyeyaasha , waxay ku soo jawaabeen warqad qoraal ah ku socda Madaxtooyada, Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo Xisbiyada Qaranka, oo xambaarsan farriintan hoos ku qoran ee muhiimka ah:
“Jawaabtayadan ku saabsan miisaaniyadda Doorashada Maarso, 2017, waxay ku salaysantahay sidii aad u mujiseen kalsooni iyo in ay idinka go’antahay in labadii doorasho ay isku mar qabsoomayaan Maarso/April, 2017. Haddii labadaa doorasho midina simbiriirixato, waxay saamayn ku yeelanaysaa awoodda aanu idinkaga taageeri karno doorashooyinka Somaliland. Waxa haboon, mar haddii aynu doorshooyinka Somaliland iskaashi dhow ka leenahay, in aanu helno miisaaniyad habka doorashada oo dhan taxgelinaysa. Waxa muhiim ah in aanu sawir guud oo buuxa hayno marka aanu qorshaynayno tageeradayada dooradhooyinka Somaliland”.
Halkay Xaaladdu weli Joogto:
Saamaynta ay kala qaadista doorashooyinka iyo kordhinta is-huwan ay ku yeelanayso JSL?
Waxa daadxoorta la raacinayaa heshiis ka dhashay go’aankii Maxkammadda Dastuuriga ah, oo uu Madaxweynuhuna Dekreeto ka soo saaray, oo ay Xisbiyada Mucaaradku duuduub ku liqeen, oo Somlailand doorashadeeda dib uga riday tii Xamar, oo taasna ay codbixiyeyaasha SL duuduub ku liqeen, oo Taageerayaasha caalamka ee Somaliland layaab ku noqotay. Intaas oo culays ah oo qaranka Somaliland dusha u ridatay ayaa haddana maanta la leeyahay “garta cuyub u celi”; Ma qabataa ummadda intaa soo samirtay? Ma qabataa muwaadiniinta u diyaarka ah in ay u tartamaan kuraasta? Ma qabataa karaamada iyo magaca JSL ee caalamka.
Haddii muddo-kordhin ay timaaddo, waxa imanaya: a) diiwaangelintii waxaas oo tacab ah la geliyey, in aan toos loogu geli Karin doorasho ee ay kaabis kale ay baahato, b) dhaqaalaha ku baxaya labada doorasho oo mar la wada qabto, sida ay KDQ ku qorsheeyeen waa : US$6,209,671; haddiise gooni gooni loo kala qabto labada doorasho ugu yaraan wuu saddex laabmayaa;
In uu ka sugayo Madaxweynuhu in uu keeno xalka ummadda iyo dunidaba ay ka sugayaan.